आज धुर्मुस-सुन्तलीकी प्यारी छोरी सुबिहानीको जन्मदिन, पाइन् यस्तो आशिर्वाद हेर्नुहोस् – Gazabkonews
हाम्री घरकी लक्ष्मी हाम्री छाेरी शुभिहानी कट्टेलकाे जन्मदिन अाज! छाेरीलाई हजुरहरुकाे अाशिर्वाद र माया मिलाेस ताकी हाम्री छाेरी सधै ज्ञानी, स्वस्थ ,सुखि अनि खुशी रहुन । 🙏 happy birthday 🎂xori love u so much 🥰❤️
तिमी साच्चिकै लक्ष्मी हौं छोरी ! तिमिलाई समय दिन नपाउदा जति हामीलाई पछुतो छ । त्यो भन्दा बढी तिमी ज्ञानि , बुझकी र असल छौँ हाम्रो लागि सबैभन्दा खुशी त्यहीँ नै हो । तिमी हाम्रो जिवनमा खुशी मात्र नभएर प्रेम , सद्भाव र मायाको खानी भएर आएकी छौँ । कठिन परिस्थितिमा पनि तिमिलाई हेरेर , सम्झेर हामी आत्मबल बढाउने गर्दछौं । त्यसैले हाम्रो लागि तिमी सबथोक हौ छोरी । जन्मदिनको धेरै धेरै सुभकामना छोरी तिमीलाई 🎉❤️🎉 # Happy birthday to you dear lovely xori subihaani 🎉❤️
त्यसैगरी कुमार कट्टेल लेख्छन्: जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छोरी सुबु ❤️
बखतको मायालाई बेवास्ता गर्दै बखतसँग छुट्टीएकी प्रतिभा अर्का पुरुषसँग यस्तो अवस्थामा फेला परिन्, अन्तै चक्कर चलेका कारण बखतलाई रुवाएर हिँडेकी रहिछन्, हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौ । भाइरल जोडी बखत र प्रतिभाको बारेमा अहिले फेरी सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुरु भएको छ । एउटा यस्तो अचम्मको जोडीको अ नपेक्षित वि योग भए पछि फेरी चर्चा सुरु भएको हो । उनीहरुको डि भोर्सको खबरले शुभचिन्तकहरु समेत चि न्तित भएका छन् ।
बच्चा भन्दा पनि सानो श्रीमान् भएका कारण यो जोडी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित थियो । बखतले सार्वजनिक रुपमा आफुहरुको कुरा सार्वजनिक गरेको भएपनि प्रतिभाले भने केही बोलेकी थिइनन् । तर अहिले पहिलो पटक प्रतिभाले पनि सम्बन्ध वि ग्रिएको खु लासा गरेकी छन् । उनले अब बखतसंग बस्न नसक्ने बताएकी छन् ।
बखत र प्रतिभा भएपछि अर्को जोडी २ वर्षीया छोरी सहित आए मिडियामा आएका थिए । नेपालमा एक पछि अर्को भाईरल हुनेको संख्या बढी रहेको छ। भाईरल भन्ने शब्दले नेपालमा जरो गाडेको बेला लेटाङ नगरपलिकामा अर्का एक जोडी फेला परेका छन्। केही समय अघि अशोक दर्जी, त्यस पछि भुईकटर, काउली बुढी हुँदै आजभोली एउटा अनौठो जोडीले त्यो ट्याग पाएको छ। ति जोडी हुन् बखत बिष्ट र प्रतिभा चौधरी।